सामाजिक अर्थात् भौतिक दूरीको करामत : RajdhaniDaily.com
Home बिचार सामाजिक अर्थात् भौतिक दूरीको करामत
सामाजिक अर्थात् भौतिक दूरीको करामत
भिडभाडमा हराउनुभन्दा एकान्तमा हराउनु राम्रो भन्दै केही लेख आइरहेका बेला कोरोना महामारीसँग बच्न यो सोच सहायकसिद्ध भएको छ । जीवनको यथार्थ नबुझेर बाहिरबाहिरै भट्केका मान्छे र निश्चित लक्ष्य लिएर काममा डटिरहेका मान्छे आफंै चिनिन्छन्, कसैले चिनाउनुपर्दैन । ड्युटीमा खटेकालाई भिडमा जाने फुर्सद हुँदैन । पक्कै पनि भिडमा हल्लिने काम नपाएका मानिस हुन् भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन ।
सामाजिक दूरी : सामाजिक दूरी संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिने संगठित क्रियाकलापमा पर्छ । संक्रमणको फैलावट रोक्न वा घटाउन निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि व्यक्तिव्यक्तिबीचको सम्पर्क घटाउन विविध वैज्ञानिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक उपाय अपनाइन्छ । सामाजिक अर्थात् भौतिक दूरीको प्रारम्भिक अवधारणा बेलायती चिकित्सक रोनाल्ड रोस र अमेरिकी चिकित्सक अल्फ्रेड लोटका आदिले दिएका थिए । महामारीमा यसको पहिलो आधुनिक प्रयोग जर्ज म्याक डोनाल्डले सन् १९५२ मा स्कटल्यान्डमा मलेरियाको संक्रमण रोक्न गरेका थिए ।
व्यक्तिव्यक्तिबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने विधिलाई सन् १९५२ ताका ‘सोसल डिस्टेन्सिङ’ भनिएको थियो । तथापि, त्यसबेला सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्न व्यक्तिव्यक्तिबीचको भेट अनिवार्य अपेक्षित थियो । तर, हाल सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटले एकअर्काबीच नभेटेर पनि सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने शब्दले बहिष्करण, विभेदको एक स्वरूप भन्ने बुझिन्छ । धेरैले नरुचाउने र उपयुक्त नभएकाले अब भौतिक दूरी भनिनुपर्छ र त्यहीअनुसार नै प्रयोग भइरहेको छ ।
महामारी रोग विज्ञानको दृष्टिकोणमा सोसल डिस्टेन्सिङको मुख्य उद्देश्य भाइरसको सर्ने र आधारभूत प्रजनन संख्या घटाउनु हो । सामाजिक अर्थात् भौतिक दूरीको उद्देश्य भनेको संक्रमित र स्वस्थ व्यक्तिबीचको सम्पर्क घटाउनु हो । जसले गर्दा संक्रामक रोग अरूमा नसरोस्, संक्रमितको संख्या नबढोस् र मृत्यु नहोस् । जब संक्रमण श्वासप्रश्वास, रुघाखोकी, प्रत्यक्ष सम्पर्क (यौनसम्पर्कसमेत, अप्रत्यक्ष सम्पर्क) संक्रमितले प्रयोग गरेका वस्तु, हावा, जीवाणु धेरै बेर बाँच्नेबाट रोग सर्ने हुँदा सामाजिक दूरी अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको छ । त्यस्तै, सिल गर्दा र आन्तरिक यात्रा ९९ प्रतिशत रोक्दा महामारी दुईदेखि तीन सातासम्म पर सरेको पाइएको छ ।
हात मिलाउनुको सट्टा नमस्ते गर्ने चलन चलाउनु विश्वमा सामाजिक दूरीको पछिल्लो प्रयोग हो
ऐतिहासिक रूपमा मध्ययुगतिर कुष्ठरोगको महामारीबाट बच्न युरोप र भारतीय महाद्वीपमा सामाजिक दूरीका रूपमा लेपर कोलोनी, लेप्रोसार्याेम वा लेपर हाउस बनाउने चलन थियो । सन् १९५२ ताकाको प्लेग महामारीबाट बच्न काठे कुटी, लाजारेट्टी बनाउने गरिएको थियो । प्लेग र कुष्ठ फैलिने माध्यमको जानकारी र प्रभावकारी उपचार आविष्कार नहुँदासम्म यही विधि प्रयोगमा थिए ।
भौतिक दूरी एक कि दुई मिटर : लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा कोरोनाको संक्रमण र प्रसार रोक्न अझ बढी खासगरी भौतिक दूरीको नियम पालना गर्दै सावधानी अपनाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सचेत गराएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक मिटर भने पनि कारोना प्रसार व्यापक रहेका देशले २ मिटरमा जोड दिएका छन् । तथापि, भौतिक दूरी कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद छ । संक्रमित व्यक्तिको जति नजिक भयो, त्यति नै भाइरस सर्ने जोखिम र जति टाढा त्यति नै सुरक्षित भइन्छ ।
चीन, डेनमार्क, फ्रान्स, सिंगापुरलगायत केही मुलुकले विश्व स्वास्थ्य संगठनझैं कम्तीमा १ मिटर टाढा रहनुपर्ने मान्यता दिएका छन् भने दक्षिण कोरियाले १.४ मिटर, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, नेदरल्यान्ड र पोर्चुगलले कम्तीमा १.५ मिटर, अमेरिकाले १.८ मिटर र बेलायत, स्पेन र क्यानाडाले २ मिटरको मापदण्ड लागू गरेका छन् । मेडिकल जर्नल लान्सेटमा प्रकाशित रिर्पाेटमा संक्रमितबाट कम्तीमा १ मिटर टाढा रहन सुझाएको छ । तर, विज्ञहरूका अनुसार १ मिटरको दूरीमा भाइरस सर्ने सम्भावना १३ प्रतिशत रहन्छ र १ मिटर बढीको दूरीमा भाइरस सर्ने जोखिम ३ प्रतिशत मात्र हुन्छ ।
खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा मुखबाट निस्कने छिटा २ मिटर परसम्म पुग्न सक्छ । तर, भाइरस सर्ने जोखिम दूरीमा मात्र नभई समयमा पनि निर्भर रहन्छ । संक्रमितको आसपासमा जति बढी समय बितायो, त्यति नै भाइरस प्रसार हुने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरेको हो । त्यस्तै, साँघुरो र हावा बाहिरिन नसक्ने स्थानमा संक्रमण फैलिने जोखिम बढी र खुला स्थानमा कम रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
विधिमा शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने, अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेक सबै सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालय बन्द गर्ने, वर्क फार्म होम, संक्रमण फैलिएको वा फैलिने सम्भावना रहेका बस्तीलाई सबैतिरबाट सिल गर्ने, स्वस्थ क्षेत्र र संक्रमित क्षेत्रबीच सम्पर्क विच्छेद गर्ने, शंकास्पदलाई होम वा हस्पिटल क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्ने, सबैखाले राजनीतिक, धार्मिक, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम अनुष्ठानमा बन्देज लगाउने, खेलकुद, यात्रा एवं यातायात रोक्ने, व्यक्तिव्यक्तिबीच भेटघाटमा समेत रोक लगाउने, इलेक्ट्रोनिक साधनका माध्यमबाट मात्र सम्पर्क गर्ने आदि पर्छन् । सन् २०२० मा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न हात मिलाउनुको सट्टा नमस्ते गर्ने चलन चलाउनु सामाजिक दूरीको पछिल्लो प्रयोग हो भने पंक्ति वा लामबद्ध रहँदा २ मिटरमा घेरा बनाई घेराभित्र उभिने वा बस्ने हो ।
प्रभावकारिता : सन् १९१८ मा फ्लुको संक्रमण फैलिदा फिलाडेल्फिया र सेन्टल्युसमा सामाजिक दूरी पालना गराउन स्कुल तथा सामाजिक भेला बन्द गराइएका थिए । फिलाडेल्फियामा सोसल डिस्टेन्सिङ लागू गराउन पाँच दिन ढिला गर्दा संक्रमण दोब्बर देखिएको थियो भने सेन्टल्युसमा संक्रमणदर घटेको थियो । स्कुल कलेज बन्द गर्दा सन् १९५७÷५८ को फ्लुको संक्रमणदर ९० प्रतिशत घटेको थियो । सन् २००४ देखि २००८ सम्म अमेरिकामा फैलिएको इन्फ्लुयन्जाको महामारीमा ५० प्रतिशत नियन्त्रणमा आएको थियो । सन् २००९ मा बेलायतमा भएको स्वाइनफ्लुको संक्रमणमा पनि यो विधि अपनाउँदा प्रभावकारी भएको थियो ।
सन् २०१० मा अमेरिकामा भएको एक अध्ययनमा सामाजिक दूरीका लागि प्रभावित १० प्रतिशत कार्यालय बन्द गर्दा संक्रमण फैलिने दर ११.९ प्रतिशत थियो भने ३० प्रतिशत कार्यालय बन्द गर्दा यो दर ४.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २००३ मा सिंगापुरमा सार्सको संक्रमण फैलिँदा सामाजिक दूरीका लागि ८ हजार मान्छेलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । ४ हजार ३ सय जनालाई सहज क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको थियो । यसो गर्दा ५८ जनालाई मात्र संक्रमण भएको थियो । क्यानाडामा सन् २००३ मै सार्स फैलिँदा सामुदायिक क्वारेन्टाइन लागू गरिएको थियो, जसले संक्रमण रोक्न मध्यम खालको प्रभावकारिता देखाएको थियो । सार्स संक्रमणका बेला एयरर्पाेटको सिलिङ गर्दा प्रभावकारी देखिएको थियो ।
नर्थ इस्टर्न विश्वविद्यालयद्वारा सन् २०२० मार्चमा प्रकाशित लेखमा चीनको वुहान सहरमा कोभिड फैलिँदा सबै आन्तरिक यात्रा रोक्दा संक्रमण तीनदेखि पाँच दिनसम्म पर सरेको थियो र संक्रमणको अन्तर्राष्ट्रियकरण ८० प्रतिशतसम्म रोकिएको देखाएको छ । बढीभन्दा बढी सुरक्षात्मक विधि प्रयोग गरेर अहिलेको महामारी संक्रमण कोभिड–१९ को संक्रमण दर घटाउनु फ्लाटनिङ द कर्भ हो । यसरी संक्रमण घट्दै जादा सबै संक्रमितलाई क्रमिक रूपमा बचाउन आवश्यक स्वास्थ्यसेवा पर्याप्त हुनेछ, सबैलाई बचाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, भिड असंगठित हुने भएकाले रोगी, संक्रमित, बलिया, कमजोर, किचिएका, घायल, मरेका सबै हुन्छन् र त भिडबाट बच्नैपर्छ । तसर्थ के सामाज, के पार्टी, के राजनीतिक सबै भिडमा जान र बस्न हुँदैन । एकान्तमा हराउँदा जिउज्यानको खतरा त हुन्न नै साथै कसैले गहिरो चिन्तन गर्न थाल्छन्, महाज्ञानी र तŒवबेत्ता पनि बन्न सकेका थुप्रै प्रमाण छन् र बन्छन् पनि । तसर्थ, हाललाई कोरोनाबाट बच्नलाई मात्र भए पनि भौतिक दूरी कायम गरौं ।
प्रचण्डको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार छ ?
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभासँग ‘विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार रहेको छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका...
पोखरा । पोखराका कुशल संचारकर्मी गणेश पौडेलको निधन भएको छ । गण्डकी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको बिहीबार बिहान गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारक्रममा निधन भएको...
बैतडीमा २ दिनमा १७० जनाको आरडिटी पोजेटिभ
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - June 5, 2020 0
बैतडी । बैतडीमा गएको २ दिनमा १७० जनाको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । भारतबाट फर्किएर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा...
अर्थ Kumar Raut - October 15, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवामा समर अफरअन्तर्गत हाल उपलब्ध गराइरहेको विभिन्न प्याकेजलाई थप परिमार्जन गरी ९० दिन लागू हुने अटमअफर उपलब्ध गराउने भएको...
Breaking News Kumar Raut - July 15, 2020 0
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नै निर्देशिकाविपरीत निजी अस्पताललाई नमुना संकलन गरेर कोरोना परीक्षण गर्ने अख्तियार दिएको पाइएको छ । २८ असारमा बसेको बैठकले...
नेपालसहित १४ मुलुकबाट जाने यात्रुलाई कतार प्रवेशमा प्रतिबन्ध
Breaking News Roshan Shrestha - March 9, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि कतारले नेपालसहित १४ मुलुकबाट जाने यात्रुलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कतारले आज सोमबारदेखि नै...
सामाजिक दूरी कायम गर्न कलाकार संघको अपिल
Not-to-be-missed Kumar Raut - August 6, 2020 0
काठमाडौं । पछिल्लो सयम नेपाली गीतको भिडियो छायांकनको क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यो छायांकनप्रति नेपाल चलचित्र कलाकार संघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ...
भक्तपुर । कोभिड—१९ को संक्रमणबाट जोगिन सरकारले कुनै पनि ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन निर्देशन दिए पनि भक्तपुरका सबै बैंकमा आइतबार सर्वसाधारणको अत्यधिक...
भर्खरै Dhruba Lamsal - July 6, 2020 0
लापर्बाही नगरौं, घरमै बसौं
बिचार Kumar Raut - March 27, 2020 0
यतिखेर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट विश्वका धेरै मुलुक आक्रान्त बनिरहेका छन् । अत्यन्तै विकसित मानिएको र आफूलाई ‘सुपरपावर’ ठान्ने अमेरिकालगायत युरोपका विकसित देशमा ...
प्रदेश Dhruba Lamsal - June 22, 2020 0
अजय साह - May 11, 2021